विकास माग्न बाबुरामको विहार यात्रा | गृहपृष्ठ
Home तीतो मीठो विकास माग्न बाबुरामको विहार यात्रा
on: १२ फाल्गुन २०६८, शुक्रबार ००:०० तीतो मीठो 14 views
प्रधानमन्त्री बाबुराम विहारका मुख्यमन्त्री नीतीश कुमारको निमन्त्रणामा भारत के गएका थिए, कुरौटे हरुलाई आलोचना गर्ने विषय भइहाल्यो । निमन्त्रणा आयो भन्दैमा ‘प्रोटोकल’समेत नहेरेर जाबो विहार घुम्न के दौडिहालेको भनी मानिसहरुले आलोचना गरे । द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद नबुझ्नेले उनको आलोचना गरेका हुन् । यसपछाडिको वैज्ञानिक तथ्यलाई नबुझ्नेहरुले आलोचना गरेका हुन् । त्यो वैज्ञानिक तथ्य हो, व्यक्तिले त्यही र त्यति नै गर्छ, जो उसको क्षमता र आदतसँग मेल खान्छ (पार्किन्सनको नियममा आधारित) । अर्थात् आफ्नो ल्याकत र हैसियतभन्दा माथि गएर त कसैले केही गर्न सक्तैन नि ! जेहोस्, बाबुराम विहार यात्रामा गए । विहारमा नीतीश कुमारसँग अलिकति भए पनि विकास माग्ने उद्देश्य बाबुरामको थियो । तर, मुखै फोरेर मागिहाल्न पनि अलि अप्ठ्यारो । त्यसो भएर उनले आफूले नेपालमा गरेका विकासकै बखान गर्नु उचित सम्झे र यस्तो भाषण तयार पारे :
श्री नीतीश कुमारजी, हाम्रो सँधियार विहारको विकास भएको कुरा हामीले ट्वालट्वाल्ती हेरिरहेका छौ । हाम्रा ठूल्ठूला औद्योगिक क्षेत्र विहारसँग जोडिएका छन् । विहारसँग हाम्रो आर्थिक सम्बन्ध नभए पनि सांस्कृतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक सम्बन्ध छँदै छ । त्यसैले हाम्रो सम्बन्ध बलियो भएको प्रमाणित गरिहाल्छ । झन् हाम्रा नदीहरुमा आउने बाढीका कारण कम्तीमा हरेक वर्षको वर्षायाममा त विहारले नेपाललाई नसम्झी सुखै छैन । त्यसैले हाम्रो सम्बन्ध रोटी र बेटीको मात्र होइन, रोटी, बेटी र बाढीको हो भनेर र्पनु परिभाषित गर्नु पर्छ । नेपालले पानी नछोडिदिने हो भने विहारले कहाँबाट ल्याएर पानी पिउने ? पानीले आर्थिक गतिविधिलाई बढाउने काम पनि गर्छ । पानीविना मानिसको जीवनको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । तर, दुःखका साथ भन्नुपर्छ– नेपालको पानी भारतले प्रयोग गर्न जानेन वा सकेन । ,यसमा मैले पनि केही गर्न सक्तिनँ । के गर्ने गर्ने ?
यत्तिका धेरै मान्छे जम्मा भएको मौकामा म यो पनि सुनाउने सुनौलो मौका गुमाउन चाहन्न कि हामीले नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार आदिमा चाहिँ क्रान्ति नै गरेका छौँ । खालि हामीले नेपालको आथिर्क विकास मात्र गर्न नसकेका हौ । हामीले नेपालमा नयाँ किसिमको ‘लोकतन्त्र’को विकास गरेका छौ । मन्त्रालयहरुमा मन्त्रीको सट्टा पीएले नै काम गर्ने गराउने परिपाटीको राम्रै सगँ विकास गरेका छौँ । त्यस्तै, हामी हामै्र दलभित्र दलित, अपहेलित, लुटिएका अविकसित विभिन्न समूहको सृजना गरिरहने छौँ र फेरि उनीहरुकै हकहितका लागि भनेर लडिरहने छौँ । यसो गर्दा हामी र हाम्रो दललाई सधै फाइदा भइरहन्छ । यसलाई नै नयाँ लोकतन्त्र नाम दिएका छौँ । यो अवधारणा मेरो भ्यागुतो उफ्रने जस्तो ‘डबल डिग इट’ विकास गर्ने सिद्धान्तमा आधारित छ । अर्थात् विरोधी दलका मासिनलाई खाल्टोमा हालेर दुई पटक पुर्ने सिद्धान्तमा आधारित छ ।
घरमा म स्वयम् पनि बिहान–बिहान योगको सट्टा यै भ्यागुतोजस्तो उफ्रने प्रयास गर्दछु । त्यसका लागि २०१२ लाई ‘नेपाल इन्भेष्टमेण्ट इयर’को घोषणा पनि गर्दिएको छु । हाम्रो देशमा दुईओटा शत्रु लुकेर बसेका छन् । एउटा बेरोजगारी र अर्को अर्धरोजगारी । यी दुई लाई भेट्न पाएँ भने वाईसीएल लगाएर बन्दुकले उडाइदिन्थेँ । भेटेको छैन र पो ! अरु लामो भाषण त के गरौं । विहारको लामो इतिहास छ । नेपाल पनि इतिहासमा धनी छ । हामी त्यो इतिहास भत्काउने प्रयासमा छौँ । त्यही प्रयास स्वरुप हामीले प्रजातन्त्र दिवस मनाएनौं , तर पनि बिदा मनाउन चाहने लाई आराम साथ बिदा दियौं । हामी हामै्र पार्टी भित्र बाट नयाँ पूँजीपति र बहु पत्नी प्रथाको विकासमा जोड तोडले लागिपरेका छौँ । हामीले १५ वर्ष देखि नेपालको विनाशका लागि काम गरिरहेका छौँ । तर, विहारले १० वर्षमा विकासको काम गरिदिएर हामीलाई पछि पारेकोमा साहै्र चित्त दुखेको छ । डाहा लागेको छ । तर, लागेर के गर्नु ? जेहोस् एकपल्टलाई प्रधानमन्त्री भइहालियो । फेरि प्रमकै रुपमा विहार आइएला नआइएला थाहा छैन । देशमा आफ्नो केही इज्जत बाँकी नै रहेकाले नेपाल फर्कदा यसो अलिकति भए पनि विकास नभए बिजुली, त्यो पनि नभए गङ्गाजल कोसेली लान पाए सधैं अनुगृहित हुने थिएँ । तपार्इंको जो इच्छा
प्रधानमन्त्री (एनेकपा माओवादी)
हुन त डा. बाबुराम भट्टराईले यिनै कुरा भनेका हुन् तर धेरै मान्छे देखेपछि
केही फरक भाषाको प्रयोग गरे ।